Vaovao - Fampidirana ny fizotry ny famolavolana ny fitambaran'ny fibre karbaona thermoplastic
Ny teknolojia mamolavola ny fitambaran'ny thermoplastic avo lenta dia nafindra indrindra avy amin'ny fitambaran'ny resina thermosetting sy ny teknolojia famoronana vy. Araka ny fitaovana isan-karazany dia azo zaraina amin'ny famolavolana, famolavolana horonan-tsary indroa, famolavolana autoclave, famolavolana kitapo banga, famolavolana filam-baravarankely, famolavolana calendering, sns. Amin'ireto fomba ireto, dia hisafidy fomba fanaingoana vitsivitsy ampiasaina kokoa izahay hanomezana anao fohy fampidirana, mba hahafahanao manana fahatakarana bebe kokoa momba ny fitambarana fibre carbon thermoplastic.
1. Famolavolana sarimihetsika roa
Ny famolavolana membrane roa, fantatra amin'ny anarana hoe famolahana infiltration membrane resin, dia fomba iray novolavolain'ny orinasa ICI hanomanana ireo singa mitambatra amin'ny prepreg. Ity fomba ity dia manampy amin'ny famolavolana sy fanodinana faritra sarotra.
Amin'ny famolavolana sarimihetsika roa, ny prepreg notapahana dia napetraka eo anelanelan'ny sosona roa misy ny sarimihetsika resin malefaka sy ny sarimihetsika metaly, ary ny periphery amin'ilay sarimihetsika dia voaisy tombo-kase amin'ny metaly na fitaovana hafa. Amin'ny dingan'ny famolavolana, aorian'ny fanamafisana ny maripana miforona dia apetraka ny tsindry sasany ary miova endrika ireo faritra ireo arakaraka ny endrik'ilay lasitra metaly, ary farany nangatsiaka sy namolavola ihany.
Amin'ny dingan'ny famolavolana sarimihetsika roa sosona, ny ampahany sy ny sarimihetsika dia matetika no fonosina sy hofoanana. Noho ny fiovaovan'ny sarimihetsika, ny fameperana ny fikorianan'ny resina dia kely lavitra noho ny an'ny lasitra henjana. Etsy ankilany, ny horonan-tsarimihetsika malemy eo ambanin'ny banga dia afaka mitondra tsindry mitovy amin'ny faritra, izay afaka manatsara ny fiovaovan'ny tsindry amin'ireo faritra ary miantoka ny kalitaon'ny famoronana.
2. Famolavolana pultrusion
Pultrusion dia dingan'ny famokarana mitohy misy mombamomba miaraka amin'ny faritra tsy miovaova. Tamin'ny voalohany, izy io dia nampiasaina hanamboarana vokatra tsotra miaraka amin'ny fibre unidirectional, nohamafisiny miampita matevina, ary nivoatra tsikelikely ho vokatra misy zana-kazo matevina, poakaty sy isan-karazany. Ankoatr'izay, ny fananana ny mombamomba dia azo noforonina mba hahafeno ny fepetra takian'ny rafitra injeniera isan-karazany.
Ny famolavolana pultrusion dia ny fanamafisana ny kasety prepreg (kofehy) ao anaty vondrona mould pultrusion. Ny prepreg dia mety ampidirina am-pontruded na prepreg, na impregnated misaraka. Ny fomba fanabeazana aizana ankapobeny dia ny impregnation fampifangaroana ny fibre sy ny fanamainana fandriana vovoka.
3. Famolavolana fanerena
Ny ravina prepreg dia tapaka araka ny haben'ny bobongolo, hafanaina ao anaty lafaoro famindroana amin'ny hafanana avo kokoa noho ny hafanan'ny hafanana resina, ary avy eo alefa any amin'ny maty lehibe noho ny fanerena mafana haingana. Ny tsingerin'ny famolavolana dia matetika vita ao anatin'ny folo segondra hatramin'ny minitra vitsy. Ity karazana fomba fanamboarana ity dia ambany fanjifana angovo, vidin'ny famokarana ambany ary famokarana avo. Io no fomba fahita mahazatra indrindra amin'ny famolavolana ny fitambaran'ny thermoplastic.
4. Famoronana rivotra
Ny mahasamihafa ny fihodinan'ny filamentan'ny fitambaran'ny thermoplastic sy ny fitambaran'ny thermosetting dia ny lokon'ny prepreg (tape) tokony hafanaina amin'ny teboka malefaka ary hafanaina eo amin'ny toerana ifandraisan'ny mandrel.
Ny fomba hafanana mahazatra dia misy ny fanafanana conduction, ny dielectric fanafanana, ny electromagnetic heatting, ny electromagnetic radiation pemanas, sns amin'ny fanamainana ny electromagnetic radiation, infrared radiation (IR), microwave (MW) ary ny RF fanafanana dia mizara ihany koa noho ny halavan'ny halavany na matetika ny onja elektromagnetika. Tao anatin'izay taona faramparany, ny rafitra fanafanana laser sy ny rafitra fanamafisam-peo ultrasonic dia novolavolaina ihany koa.
Tao anatin'izay taona faramparany izay dia namboarina ny fizotran-drivotra vaovao, ao anatin'izany ny fomba famolavolana dingana iray, izany hoe ny kofehy dia vita amin'ny kofehy prepreg (kasety) amin'ny alàlan'ny fandriana liquefaction amin'ny vovoka resina thermoplastic, ary avy eo maratra mivantana amin'ny mandrel; Ankoatr'izay, amin'ny alàlan'ny fomba fananganana fanamainana, izany hoe ny kofehy vita amin'ny kibon'ny karbaona (tape) dia mandeha amin'ny herinaratra mivantana, ary ny resina thermoplastic dia atsonika amin'ny alàlan'ny fanamafisana sy ny fanafanana, ka ny kofehy fibre (tape) dia azo zaraina ho vokatra; Ny fahatelo dia ny fampiasana robot amin'ny familiana, fanatsarana ny fahamendrehana sy ny automatisation an'ireo vokatra miolakolaka, noho izany dia nahazo fiheverana lehibe.